नेपाली खेलाडी आइसिसिको बरियतामा | Rajmarga
नेपाली खेलाडी आइसिसिको बरियतामा
काठमाडौँ । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगिता खेलेलगत्तै नेपाली खलाडी बरियतामा समावेश भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र ज्ञानेन्द्र मल्ल परेका छन् । सन्दीप २१७ औँ स्थानमा छन् भने सोमपाल २२९ औँ तथा ज्ञानेन्द्र २३६ औँ बरियतामा छन् ।
यसअघि यही साउन २३ गते आइसिसिले सार्वजनिक गरेको टी–२० बरियतामा कप्तान पारस खड्का, शरद भेषवाकर, बसन्त रेग्मी र सोमपाल कामी शीर्ष १०० भित्र परेका थिए । पारश ९०औं स्थान, शरद ९८औँ स्थानमा, वसन्त ७१औँ स्थानमा तथा सोमपाल ९२औँ स्थानमा परेका थिए । रासस
Previous post: अब गर्भमा रहेको बच्चाले पनि अंश पाउने, यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
Next post: हस्तमैथुन गर्नेले बुझ्नै पर्ने कुरा…
भारतीय जुडो च्याम्पियनलाई बधाई
पत्याउनु हुन्छ ! एक जना फुटबल खेलाडीको मूल्य ९०० करोड भारतीय रुपैयाँ ?
एसिया कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो हार
क्रिस्टियानो रोनाल्डो: बलात्कार आरोपबारे के भन्छन् उनका प्रायोजक